Hiran State - News: Shirka Kenya oo qaban qaabadiisa laga dareenayo Nairobi.
Shirka Kenya oo qaban qaabadiisa laga dareenayo Nairobi.
Kenya: (hiranstate.com) Waxaa hubanti ah hadii aysan maalmaha inagu soo aadan hogaanka dalka ugu sareeya aysan fadhiga ka kicin oo aysan there is no Tommorrow oo kale u shaqeyn in siyaasadahan cusub ee dalka ka curtay lagu baa bin doono.
Dabcan maamul goboleedyada dalka ka jira ee shirka ka qeyb galayo waxey ka turjumayaan shacabka ay metelaan aduunyaduna waxey arkeysaa inuusan jirin isku xir guud oo ka dhaxeeya maamul goboleedyadii horey u jiray iyo Hogaanka sare ee TFGda maamulada cusubna warkooda daa. Ka qeyb galka ay shirka ka qeyb galayaan wafti ka socda TFGda oo uu hogaaminayo Gudomiyaha baarlamaanka Somaliya , iskaba daa gudoomiyaha baarlamaankee xitaa wafti xildhibaano ah hadey ka qeyb galaan Madaxweynaha iyo Farmaajo waxey u muuqaal ekaan doonaan hogaamiyaal maqaar saar ah oo dalkooda leyska maamusho.
Dabcan maamul goboleedyada ka qeyb galayo iyo kuwa wado kasta oo ay shirkaasi kaka qeyb gali karaan ku mashquulsan dhamaantood waxa iney arintaas ku dhiiradaan ku qasbay waa xukumada maanta jirta. Hadiise maamulada dalka ka curtay kuwii is qilafsana ay shir iskugu keeni laheyd dowladu amaba midkii ay u aragto inuu yahay maamul ay wada shaqeyn dhaxmari karto awooda dowladuna ku fidin karto dalka intiisa kale miyaa loo baahnaan lahaa shir ay qaramada midoobay dalka dibadiisa ku qabato ayuu ka dhawaajiyey ganacsade ku sugan dalkaasi Kenya.
Guusha wakiilka qaramamda midoobay.
Wakiilka qaramada midoobay kuma dhiiran karin inuu shirkaan iclaamiyo maalintii uu waraaqaha casuumaada u geeyey madaxweynaha iyo R/wasaaraha hadii isla maalinkaas lagu gacan seyri lahaa. wakiilka arintaani inuu ku dhiirado oo hogaanka dalka ugu sareeya dhamaantood shir ugu yeero hal mar waxuu ogaa ineysan aheyn wax hada ku sucub hogaamiyaasha Somalida oo horey ayuu Walad Cabdalla u sameeyey.
Diidmada ay TFGdu diiday shirka iyo faa'idadiisa.
Shirkani iney diidaan hogaanka dalka ugu sareeya xaq ayey u leeyahiin waayo waa hogankii dalka xitaa hadii uu dhaco wakiilada qaramada midoobay ay u soo diri doonto Somaliya waxey ogaan doonaan ugu yaraan mudo 20 sano ku dhawaad ah ay tahay markii ugu horeysay ee hadal ka soo yeeray qaramada midoobay la diido taasina dadnimada Somalida maanta ayey ku jirtaa in dhiig iyo dadnimo leyska raadiyo si wax badan oo mustaqbalka lagugu sameyn lahaa ay uga digtoonaadaan wakiilada mustaqbalka imaan doona.
Hadii ay maanta Somalinimadii iyo damiirkii ay bulshadu lahaan jirtay ay nooshahay maamulada shirka ka qeyb galayo iyagoo xitaa aan wax jaceyl ah u heyn hogaanka dalka ugu sareeya ayey shirkaasi iyaguna diidi lahayeen, laakinse Somali horey ayaa loosahan saday oo xitaa iyadoo shirka Kenya dhacayo hadii 3 maalmood shir kale oo Ethiopiya ka dhacayo lagu abaabulo halkaas lama waaynayo Somali kale oo ka qeyb gasha sidaasina dalkii iyo dadkii waxey 21 sano ugu jiraan jahwareer iyo hebelaa la casuumay ee adigana shir hebel tag.
Marka dhaleeceynta joogtada ah ee TFgda laga soo tago waxaa aad shacabka Somaliyeed u soo jiitay hadalkii uu R/wasaare Farmaajo ka sheegay idaacadaha ee aha in aanu nahay umada isku af, diin iyo dhaqan ah arimaheenan aanu ku xalisaneyno gudaha wadanka.hadalkaasi meel weyn ayuu taabanayaa marka dhinaca wadaniyada dib loo eego, laakinse marka siyaasada Farmaajo iyo Shariif la fiiriyo waxuu u ek yahay mid uun shacabka la maqashiyey.
Waxaa la raadinayaa waa dib u heshiisiin shirka Kenya waxey maamulada lagu casuumay ka codsadeen ineysan tagin oo ay hogaanka dalka ixtiraamaan. Madaxweynaha iyo Wasiirka 1aad meel aan sidaasi ugu fogeyn waxaa degan madaxweynaha Hiiraan State kaas ayey wanaajisan lahayeen hadii Somalinimo nin jecleysi aysan wadin xukumada manta jirta. waxaana hubanti ah hadii uu maanta Mogdisho ka dhoofo oo uu xariiftan u galo sidii uu shirka Kenya uga qeyb gali lahaa iney idaacadaha berito ka dhaleeceynayaan.
Marka ma Somalidii ayaa xigmadii ka dhamaatay ?
Somalinimadii iyo dantii guud ayaa leyska indho tirayaa?
Ma qabiilkii ayaa waji kale looyeelay?
Ma dadkaan wanaaga ujeedin?
Bal wax kaleba ka soo tag in TFgdu shacabka Somaliyeed kasbato yaa ka hor taagan?
Xalka deg deg ah ee TFgda dhagartan ilaa heer caalami ah kaka bad baadi karto waa.
1- Hogaanka dalka waa iney af aan midka hada jira aheyn kula hadlaan shacabka oo ay kasbadaan.
2- Waa in ay maamulada dalka ka jira qaabkii ay doonaanba ha ku yimaadaane la macaamilaan oo ay si deg deg ah ku aqoonsadaan kuwii ay wada shaqeyni dhax mari karto.
3- Somalida oo wada jirta waa in qaramada midoobay iyo aduunayda u sheegaan in arimaha gaar ka ah ee dalkeena faraha lagala baxo.
Hadii aan intaasi deg deg wax looga qaban xili waxaa iman doonta Somalidu ay ku murmi doonaan Calanka Baluuga ah looma baahna oo degaankasta Calan ayuu leeyahay ileen dhibta maanta leyska indha tiro berito shacbaka ayuu ku soolaaban doonaaye.
Xogtani waa mid aanu ka soo aruurinay qeybaha kala duwan ee bulshada Somaliyeed. waana xaqiiqda dalka ka jirto.
· admin on April 10 2011 12:22:02 · 0 Comments · 1712 Reads ·
14,579,442 unique visits